Shina LED ambanin'ny tany fahazavana mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Home > Products > Street Light > LED ambanin'ny tany fahazavana
Ny làlan-jiro LED alevenana dia omena fiasana overcharge sy overdischarge kokoa, izay mahatonga ny bateria maharitra kokoa ary mampitoetra ny vokatra maharitra sy amin'ny toerana miasa tsara mandritra ny fotoana maharitra.
Ny bateria nickel-cadmium avo lenta dia ampiasaina. Manana fahaiza-manao lehibe, fahombiazana ambony ary fiarovana amin'ny famaritana famaritana vokatra: Ny jiro famantarana vonjy maika amin'ny alàlan'ny famonoana afo dia mandeha ho azy ny fiampangana amin'ny bateria rehefa miasa mahazatra ny famatsiana herinaratra AC. Rehefa tsy mahomby ny famatsiana herinaratra AC noho ny fahadisoana, ny jiro indostrialy dia ao anatin'ny
Ny trano jiro sy tontolon'ny jiro ambanin'ny tany dia vita amin'ny fitaovana tsy azo kitihina ary ny fifandraisany anatiny dia vita amin'ny tariby miady amin'ny lelafo miaraka amin'ny mari-pana mahery vaika kokoa noho ny 125 Â ° C.
Ny loharano maivana dia mandrafitra hazavana avo lenta sy famokarana angovo, izay manana tombony amin'ny hazavana avo, ny fanjifana ambany angovo, faritra fitrandrahana lehibe ary fiainana maharitra.
Ny jiro LED ambanin'ny tany dia ampiasaina betsaka amin'ny jiro ety ivelany toa ny kianja, ny zaridaina ivelany sy ny fialam-boly. Zavamaniry zaridaina, bozaka, kianja, tokotanin-trano, voninkazo voninkazo, haingon-trano an-dalambe an-tongotra, riandrano, loharano sy toerana hafa ho an'ny jiro amin'ny alina, ampio ny mamelona amin'ny fiainana.
Buy LED ambanin'ny tany fahazavana nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba LED ambanin'ny tany fahazavana ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized LED ambanin'ny tany fahazavana Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.